मौद्रिक नीतिपछि किन घट्यो सेयर बजार ? कारोबार रकममा वृद्धिको कारण ! - अभियान खबर
काठमाडौं : मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेप्से सूचक घटिरहँदा पनि कारोबार रकममा भने उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले मर्जरका सम्बन्धमा स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । कुनै पनि संस्थाले फोर्सफुल मर्जमा जानुपर्ने छैन । आवश्कता र चाहना अनुसार मर्ज वा एक्विजिसिन गर्न सक्नेछन् । यसर्थ, सेयर बजारमा पनि यसले स्पष्टता ल्याएको विश्लेषण हुँदैछ । एक–दुई दिन नेप्से घटे पनि अन्ततः सेयर बजारको गति सकारात्मक हुने देखिन्छ ।
तर ठूला बैंक मर्जरलाई आधार बनाएर सेयर कारोबार गर्नेहरु भने केही अलमलमा परेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले विभिन्न हल्ला र अड्कलबाजीका भरमा मर्जरलाई आधार मानेर विशेष गरी साना वाणिज्य बैंकका सेयर किन्ने क्रम बढाएका थिए । तुलनात्मक रुपमा सबल बैंकसँग मर्जमा जाने र सेयर स्वाप अनुपात मिलाउँदा लाभ लिन सकिने अनुमानमा सेयर कारोबार गर्नेहरु केही हच्किएको देखिन्छ । तर साना र तुलनात्मक रुपमा नयाँ वाणिज्य बैंकहरुको बजार भाउ सस्तो छ ।
अहिलेको मूल्यमा सेयर खरिद गरेकाले दीर्घकालमा राम्रो लाभ लिन सक्ने बजारका अनुभवीहरुले बताउने गरेका छन् । यसर्थ, उनीहरु पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । मौद्रिक नीतिपछि १ दिनको कारोबारकै आधारमा बजार कता जान्छ भनेर ठोकुवा गर्नु हुँदैन । सूचक घटिरहँदा पनि कारोबार रकम राम्रो सुधार भएको छ । खरिदबिक्री रकम बढेकाले आशावादी ठाउँ प्रशस्त छ । कतिपय लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारको पनि सम्बोधन खोजेको देखिन्छ ।
तर मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष रुपमा पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । मुद्रा बजारमा उसले चाल्ने कदमले पुँजी बजार प्रभावित हुने मात्र हो । बैंकहरुले सेयर धितो कर्जामा प्रवाह गर्न सक्ने ऋण, मार्जिन कल लगायतका प्रावधानले बजारलाई प्रभावित गर्छ । तर केन्द्रीय बैंकले यी कुनै पनि विषयलाई चलाएको छैन । बजार सुधारका काम भइसकेका छन् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम पनि अघि बढिरहेको छ ।
यसर्थ, यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट पुँजी बजारले खासै अपेक्षा गरेको पनि थिएन । समग्रमा पुँजी बजारको दीर्घकालीन गति सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेप्से सूचक बिहीबार १४.१५ अंकले घटेर १२६९.९२ विन्दुमा आइपुगेको छ । बजार १.१०% ले घटेको हो । १७१ कम्पनीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । २१ लाख ९८ हजार १२६ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् ।
कारोबार भएका सबै समूहका सूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बिमा समूहको सूचक ८४.३५ विन्दुले घटेको छ । वाणिज्य बैंक समूहको सूचक पनि १२.५६ अंकले तल झरेको छ । कारोबार रकममा प्रभु बैंकले अग्रता लिएको छ । प्रभुको ६ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको हो ।
कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक परेका छन् । कारोबार रकममा नेपाल ल्युब आयलले अग्रता लिएको छ । यसको भाउ ८.८१% ले बढेको हो । सबैभन्दा धेरै युनियन हाइड्रोपावरका लगाीकर्ताले ९.५७% का दरले गुमाएका छन् ।
कांंग्रेस-समाजवादीबीच राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन गर्ने सहमति
Posted on January 3, 2020 January 3, 2020 Author abhiyaan
नेपाली कांंग्रेस र समाजवादी पार्टी नेपालले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति गरेका छन्।गठबन्धन गर्ने सहमति गरेका छन्। माघ ९ गते रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि पुस २० गते उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्छ। कांंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शुक्रबार तालमेल गरेर जाने सहमति भएको हो। समाजवादी पार्टीका […]
काठमाडौं । निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई कानुनमन्त्री बनाइने भएको छ । उनलाई आजै कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि उपसभामुख रहेकी शिवमायाले सभामुखमा दाबी गरेको भए पनि नेकपा सचिवालयले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ संशोधनको तयारी थालेको छ । सत्र वर्ष पुरानो नीतिमा यातायातका क्षेत्रहरूलाई समेट्न नसकेको भन्दै संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयारी भएको र केही दिनमै मन्त्रालयमा पेश गरिने भएको छ । यातायात नीति २०५८ अनुसार यातायात भन्नाले सडक यातायातलाई मात्र सम्बोधन गरिएको थियो […]